Ubekwe ezimpondweni kwiNdebe yoMhlaba
UREABETSWE Mpete oyimenenja ehola uhlelo lokusingathwa kweNdebe yoMhlaba ye-netball ezobanjelwa kuleli ngo-2023 Isithombe: SITHUNYELWE
UREABETSWE Mpete onikezwe isikhundla sokuhola ithimba elihlanganisa ukusingatha iNdebe yoMhlaba ye-netball ezobanjelwa kuleli ngo-2023, uthi izinhlelo zabo aziphazamisekanga phezu kokubheduka kweCovid-19.
Lesi sikhulu sikusho lokhu emuva komqhudelwano iSpar Challenge Test Series lapho iqembu leNingizimu Afrika, iSpar Proteas libukise ngeMalawi liyihlula kuyona yomithathu imidlalo.
UMpete uthe ukusebenzisa ubuchwepheshe beZoom kwenza bakwazi ukuqhubeka nezinhlelo zabo.
“Siya ngokujwayela ukubamba imihlangano ngeZoom. Sisebenzisana kahle nezigaba ezintathu zikahulumeni okuyidolobha iKapa, uhulumeni wesifundazwe iWestern Cape nohulumeni ezingeni likazwelonke. Ngijabule ngokunikezwa ithuba lokuba nesandla kulokhu okuzokwenza. Abantu besifazane bavelele kanjalo nomdlalo we-netball uthole ukugqama okufanele.
“Kuwumsebenzi omkhulu kodwa sinombono obanzi ngalo mqhudelwano futhi sikubheke ngabomvu ukwamukela amazwe ehlukene eNingizimu Afrika,” kusho uMpete.
Phambilini uMpethe ubesebenza kwiSASCOC eHigh Performance Centre ebhekelele uhlelo lokucijwa kwabasubathi abaya emiqhudelwaneni yomhlaba, okukhona ama-Olympic, amaCommonwealth Games nama-Youth Olympic. Ngonyaka ozayo kuzoqokwa ibhodi azosebenzisana nayo ezinhlelweni ze-International Netball Federation (INF) zokuhlelwa kweNdebe yoMhlaba.
“Kuzomele ngoJulayi sibikele i-INF ngokuthi amalungiselelo ethu asekusiphi isigaba. Okuhle wukuthi umqhudelwano uzobanjelwa edolobheni elilodwa,” kusho uMpete.
Umqhudelwano odlule weNdebe yoMhlaba ye-netball ubuseLiverpool, e-England nyakenye. Iqembu lakuleli laqeda endaweni yesine emuva kokuhluleka wukuzibekisela kowamanqamu.
UMengameli weNetball South Africa, uCecilia Molekwane, usekusho kaningi ukuthi ngaphandle kokuthi bafuna ukusingatha umqhudelwano osezingeni eliphezulu, bafuna lo mdlalo ukhule ufinyelele ezingeni elikhokhelwayo kubadlali njengoba okwamanje lapha eNingizimu Afrika usesigabeni sama-amesha.
UREABETSWE Mpete oyimenenja ehola uhlelo lokusingathwa kweNdebe yoMhlaba ye-netball ezobanjelwa kuleli ngo-2023